एफक्यान अब कता (बहस) ? ‘आउने महाधिवेशनमा उम्मेदवारी नदिने’ अध्यक्ष श्रेष्ठको घोषणा
पूर्वाधार निर्माणमा जोडिने निर्माण व्यवसायीहरुको यो संस्था स्थापना २६ औं वर्षमा प्रवेश गर्दासम्म यसले निकै चुनौतीपूर्ण मोडहरु पार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको हो
| 2018-05-24 Published
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । नेपालको निर्माण उद्योगको एउटैमात्र छाता संगठनका रुपमा रहेको ‘नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ’ (एफक्यान) आफ्नो २० औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने बेला विशेष साधारण सभामार्फत् अघि बढ्ने कसरतमा छ ।
निजी क्षेत्रमार्फत् राज्यको पूर्वाधार निर्माणमा जोडिने निर्माण व्यवसायीहरुको यो संस्था स्थापना २६ औं वर्षमा प्रवेश गर्दासम्म यसले निकै चुनौतीपूर्ण मोडहरु पार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको हो ।
पूर्वाधार विकास सम्बन्धी देशको नीति र नियमनकारी निकायहरु निकम्मा जस्तै बनेको यो मुलुकले निजी र सरकारी क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण (संरचना र नीतिगतरुपमै) बनाउन नसक्ता यतिबेला नेपालको निर्माण उद्योग पनि ‘मिलेमतो’को राजका रुपमा विकृत थलो बन्दै गएको गुनासो बढिरहेको छ ।
देशले संघीयता वरण गरेसँगै मुलुकभित्र रहेका एफक्यान र यस्तै संघसंस्थाहरु पनि यतिबेला नयाँ संरचना मात्रै नभई नयाँ नीति, नयाँ भिजन र कार्यक्रम सहित नयाँ युगमा प्रवेश गर्नै पर्ने भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक दबाबमा छन् ।
यो दबाबको प्रभाव यतिबेला निर्माण क्षेत्रको यो संस्थाले पनि भोगिरहेको छ ।
‘केही मानवीय त्रुटि’का कारण प्रादेशिक संरचनामा गएको एफक्यानको विधानमा विवाद उत्पन्न भयो । विवादलाई गहिरिएर हेर्दा भावी नेतृत्व कसले हत्याउने भन्ने मनोविज्ञान पनि अर्काे कडीका रुपमा देखापर्छ । र, दोस्रो चाहिँ यस्ता संस्था हाँक्ने सारथिहरुमा नहुर्किएको लोकतान्त्रिक संस्कार पनि, जसले गर्दा छलफलबाट निराकरण हुने विषयहरु विवाद र घम्साघम्सीका रुपमा देखिएझैं लाग्छ ।
विधानको २७ नम्बर बुँदा र ‘मताधिकार छैन’ भन्ने बुँदा यतिबेला बहसमा तानिएको छ ।
महासंघ मूलतः पेसागत संगठन भए पनि यसका ‘प्लेयर’हरु प्रत्यक्ष रुपमा ‘निर्माण व्यवसायी’ तर अप्रत्यक्ष रुपमा कुनै न कुनै राजनीतिक दलको मनोविज्ञानबाट ‘ग्रसित’हरुको जमघट पनि हो भन्ने भुल्न हुँदैन ।
जतिबेला नेतृत्व प्रतिस्पर्धाको समय आउँछ, त्यतिबेला यो मनोविज्ञान पनि प्रकट भएको र भित्री रुपमा यसैले ‘ड्राइभ’ गरेको यर्थाथ हो ।
दक्षिण एसियाजस्तो पिछडिएको मुलुकमा पेसागत धर्म भन्दा पनि राजनीतिक धर्म बढी नै हाबी हुने गरेको यर्थाथ नयाँ होइन ।
‘तर, नयाँ हुनु पर्ने यतिबेला के चाहिँ हो भने, मुलुक अब राजनीतिक नभई आर्थिक ‘क्रान्ति’को चरणमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा समृद्धिको नारा गुञ्जिरहेको अवस्था छ । समृद्धिको आधार पूर्वाधारको विकास बाहेक अर्काे विकल्प छैन । यो सत्य जान्दाजान्दै पनि नेपालको पेसागत संस्थाहरुले पूर्णरुपमा पेसागत मर्यादा, पेसागत आचरण र पेसागत प्रतिस्पर्धालाई नै प्रमुखता दिनु पर्नेमा त्यसो हुन नसकिरहेको देखिन्छ । यो सच्चिनु पर्ने कुरा हो,’ भन्छन् निर्माण क्षेत्रविश्लेषक अर्थविद् तेज ढकाल ।
जेहोस्, यतिबेला एफक्यान-- गौचन हत्या प्रकरणबाट छताछुल्ल भएको निर्माण जगत्भित्र हुर्किएका विकृति हटाउनै पर्ने दबाब एकातिर रहेको छ भने अर्काेतिर देशले खोजेको समृद्धिको मनोवैज्ञानिक दबाब र अवसरका लागि यो पेसामा रहेका युवा पुस्ताको नेतृत्व विकासको हस्तक्षेपकारी आकांक्षाको दबाबमा छ ।
समग्रमा, एफक्यान इतिहासको नयाँ मोडमा उभिएको छ ।
यो पानीढलो यस्तो ठाउँमा छ, कि यसले आज लिने बाटो सही दिशामा गएन भने यो संस्थाको भविष्य समेत कुन अवस्थामा जाला भन्ने ठाउँमा छ ।
ठिक यही बेला एफक्यान अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठले राजधानीको होटेल प्यागोडामा भएको एक विशेष भेलामा ‘आउने नेतृत्वका लागि आफूले उम्मेदवारी नदिने’ घोषणा गरे । प्रस्तुत छ, यही सन्दर्भमा एफक्यान अध्यक्ष श्रेष्ठसँग निर्माण मिडियाले गरेको छलफलको सारसंक्षेप–
अध्यक्षज्यू, विशेष साधारणसभाको तयारीबारे बताइदिनु हुन्छ कि !
धन्यवाद, यतिबेला नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ विशेष साधारण सभाको तयारीमा छ । यसबारे सबै तयारी पूरा भइसकेको छ । महासंघको जिन्दगीमा नयाँ मोड दिने यस घडीमा हामीले देशैभरका निर्माण व्यवसायी मित्रहरुलाई कार्यक्रममा सहभागी हुन, एजेन्डा माथि सिर्जनात्मक सुझावहरु दिन अपिल पनि गरेका छौं ।
विशेष साधारण सभाको एजेन्डाहरु के हुन् त ?
यो विशेष साधारण सभा हो । यसका मुख्यतः २ वटा एजेन्डा छन् ।
यी एजेन्डा पनि विशेष किसिमकै छन् । पहिलो हो विधानमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने बारे के गर्ने भन्ने र दोस्रो हो, आगामी महाधिवेशनको मिति टुंगो लगाउने । यही हो ।
विशेष अधिवेशन गर्नै पर्ने कारण के आयो त अध्यक्षज्यू ?
किनभने, विशेष परिस्थिति पैदा भएपछि हरेक संघसंस्थाले आफ्नो संस्थाको जिन्दगीमा विशेष निर्णय लिनु पर्ने भएपछि यस्तो विशेष अधिवेशन गर्ने गर्छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका हकमा पनि केही विधानगत समस्याहरु देखा परे ।
विधानमा रहेका केही प्रावधानहरुमा प्रदेशका प्रतिनिधिहरुले चुनिन र चुन्न पाउने अधिकारबारे विरोधाभाषपूर्ण कुरा आएपछि पक्ष विपक्षमा तर्कहरु हुने नै भए ।
त्यसैले म एउटा अध्यक्ष भएको नाताले, महासंघको भाविष्यबारे सोच्नु पर्दा विवादकै बीचमा नेतृत्व छनोट हुने कुराले झन् पछि झन् जटिलता थप्ला भनेर सुझबुझपूर्ण निर्णय लिन लागिएकाले विशेष साधारण सभा डाकिएको हो ।
र, यसमा बाहिर हल्ला पिटाइएजस्तो कुनै गलत मक्सद वा कारणले नभई महासंघको जिन्दगीमा भइपरी आएको समस्या हल गर्न हामीले सामूहिक रुपमै एकैठाउँ जम्मा हुने निर्णय गरेका हौं ।
अनि, तपाईले त आउने महाधिवेशनमा आफूले उम्मेदवारी नदिने घोषणा गर्नुभयो त ?
यसो नि, म त यतिबेला अभिभावकीय ठाउँमा छु । म त सामाजिक अभियन्ता पनि हुँ । लायन्स पृष्ठभूमिबाट पनि आएको मान्छे हुँ । मैले त चुनाव गराउनु पर्छ नि ।
यदि चुनाव मैले गराउँछु भने म आफैं उम्मेदवार हुने कुरा कति विश्वसनीय हुन्छ भन्ने त आम मानिसले सोध्ने गर्छ । त्यसले मेरा लागि यतिबेला संस्था नै प्रमुख कुरा हो ।
यसको भविष्यका लागि मैले नयाँ नेतृत्व स्थापित गराउने हो । र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने हो नि । यही हैन लोकतान्त्रिक आचरण भनेको पनि ?
सबैले संस्था ठूलो हो भनी सोच्नु परो । आफू आउने कि नआउने, आफूले पाउने कि नपाउने भन्ने हो भने त संस्थामा व्यक्तिवाद हाबी भइहाल्छ नि ! हैन र ?
त्यसैले, मैले यस्तो भनेको हुँ । यद्यपि म आफू पनि अध्यक्षको दाबी गर्ने ठाउँमा त छु नि । तर, जब मैले यस्तो भूमिका खेल्नु पर्छ भने मैले उम्मेदवारी दिन्न पो भनेको हुँ त !
बिहीबार, १० जेठ, ०७५